फ्रेडी Ljungberg बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
घर फुटबल EXTRAS फुटबल प्रबन्धकहरू फ्रेडी Ljungberg बचपन कहानी अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
हाम्रो फ्रेडी लजung्गबर्ग जीवनीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो फ्रेडेको संक्षिप्त इतिहास हो, स्वीडेनका पूर्व पेशेवर फुटबलर। हामी उहाँको प्रारम्भिक दिनहरूदेखि सुरु हुन्छौं, कहिले र कसरी उहाँ प्रख्यात भए। तपाईंलाई फ्रेडी लजung्गबर्गको बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उहाँको जीवनको मार्गचित्रको ग्यालरी छ।
लाइफ एण्ड राइज अफ फ्रेड्डी लजungबर्ग।
हो, सबैलाई थाँहा छ कि उनी पहिलेको थियो आर्सेनल पौराणिक कथा र अंडरवियर मोडेल को लेखेको समयमा, अर्सेनल निम्न स्थानमा अन्तरिम प्रमुख कोच बन्न पुगेको छ उनाई एमरीको बोरा यद्यपि, केवल एक हात फुटबल प्रशंसकहरूले फ्रेडी लजjबर्गको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई ध्यान दिन्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं.
फ्रेडी लजung्गबर्ग बाल्यकाल कहानी - परिवार पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन:
सुरू गर्न, उनको पूरा नामहरू छन् कार्ल फ्रेड्रिक "फ्रेडी" लजjबर्ग। फ्रेडी जुj्गबर्ग जसलाई लोकप्रिय नामले चिनिन्छ, अप्रिलको 16th दिनमा 1977th मा जन्मनुभएको थियो, उनकी आमा, इलिजाबेथ बोडिल जु L्गबर्ग र बुबा, रोवे अल्वे अर्लि L लj्गबर्ग, स्वीडेन, पश्चिमी यूरोपमा।
फ्रेड्डीको परिवारको उत्पत्ति सानो स्वीडेनको नगरपालिकाबाट आएको छ जसलाई भिट्स्जे भनिन्छ (1,665 मा 2010 निवासीहरू)। उसले आफ्नो जीवनको पहिलो4वर्ष आफ्नो सुन्दर जन्मस्थल भिट्स्जेमा बिताए आफ्ना आमाबुबा र बच्चा भाईको साथ। कार्ल ओस्कर फिलिप ल्ung्गबर्ग.
फ्रेड्डी जुj्गबर्गले आफ्नो शुरुआती वर्षहरू भित्जोमा बिताए।
भिट्स्जे एक सुन्दर स्विडेनी नगरपालिका हो जुन इतिहासमा डेनमार्क, नर्वे र स्वीडेनको बीचको युद्ध स्थल भनेर चिनिन्छ जसले यसको स्वामित्व दाबी गर्न लडे। तपाईंलाई थाँहा थियो?… यो भिट्ट्ज्जेको पानीमा थियो जसले स्वीडेनका राजा गुस्ताभस एडोल्फसलाई डेनिस सेनाबाट पछि हटेको लगभग डुबेको थियो। अब, कि ईतिहासको पर्याप्त छ !!
पारिवारिक पृष्ठभूमि: फ्रेडी, विपरित Zlatan, एक उच्च-वर्ग परिवार पृष्ठभूमिबाट हुर्कनको लागि भाग्यशाली थियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उसको बुवा रोय एल्वे अर्लिling एक धनी सिभिल इञ्जिनियर हो जो पछि उसको निर्माण र परामर्श व्यवसायको स्वामित्वमा गए। फ्रेड्डी जुung्गबर्गको आमा इलिसाबेथ बोडिल ल्ung्गबर्ग पनि स्विडेनी श्रम विभागको एक ठूलो शट हो।
भिट्स्जेमा ö वर्ष बसोबास गरिसकेपछि १51982२ मा फ्रेडे लजbergबर्गका बाबुआमाले नगरपालिका छोडे जो स्विडेनीको पश्चिमी तटको निसान नदीको मुखमा अवस्थित धनी सहर हल्मस्टडमा बसोबास गर्न थाले। फ्रेड्डीको जन्मस्थल भिट्स्जे छोड्ने परिवारको प्रयास राम्रोसँग सकिएन फ्रेडी लजj्गबर्ग। कठोर जन्म year बर्षे बच्चा जो आफ्नो जन्मस्थानको साथ गहिरो प्रेममा परेको थियो उसको सम्पूर्ण परिवार हल्मस्टडको लागि शहर छोड्न चाहँदैनथे। उनले आफ्ना धनी अभिभावकहरूसँग तर्क गरे जसले आफ्नो निर्णयलाई पछाडि छोड्ने धेरै कारणहरू देखेनन्। उनीहरूले उनलाई भिट्जजालबाट हल्लमस्ट्याडको लागि टाढा बन्डल गरे। पछि आफ्नो जीवनमा, फ्रेड्डीले शहरको अनुभव गरे आफ्नो भाग्य राखिएको थियो जहाँ थियो
भित्त्जोलाई हल्मस्ट्याडको महान् शहरमा छोड्नु फ्रेड्डी जुj्गबर्गका बाबुआमाले उनीहरुको लागि गरेको उत्तम निर्णय थियो।
फ्रेडी लजung्गबर्ग बाल्यकाल कहानी - शिक्षा र क्यारियर निर्माण:
हाल्मस्टैड एक मायालु स्विडेनी शहर हो जुन बलि bow, गल्फ, जिम्नास्टिक, फुटबल, पौंडी, टेनिस, आइस हकी, क्रिकेट र अन्य खेलहरूको एक मेजबानको लागि उपयुक्त छ। जब पढ्ने एबच्चा, फ्रेड्डीले ह्यान्डबलको लागि प्रतिभा विकास गर्‍यो। यो एक हदसम्म पुग्यो जब उनको ह्यान्डबल प्रतिभा स्वीडेनको राष्ट्रिय ह्यान्डबल टीम द्वारा मान्यता प्राप्त थियो, एक विकास जसले फ्रेडीलाई उनको देशको प्रतिनिधित्व गर्न बोलाइएको थियो। शोकाकुल हुँदै, उनले प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै उनको रुचि फुटबलमा मात्र थियो।
फ्रेड्डी जुj्गबर्ग प्रारम्भिक वर्षहरू - ऊ फुटबलको प्रतिरोध गर्न सकेन, सबै खेलहरू मध्ये यो छनौट गरेर।
फ्रेडी अन्य खेल विकल्पहरूमा फुटबलको प्रतिरोध गर्न सक्दैनन्। को धनी बच्चा फुटबल र राम्रो ग्रेड प्राप्त बीचको सन्तुलन प्रहार गर्न सक्षम थियो।
फ्रेडी लजung्गबर्ग बाल्यकाल कहानी - प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
फ्रेडी Ljungberg को छोरा खेल्ने सपनाहरू पूरा गर्नका लागि आमाबाबुले कहिले पनि बोलेनन्। उनीहरूले उसलाई ह्याल्मस्टैड्स बीकेसँग फुटबल शिक्षा प्राप्त गर्न उनको खोजीमा समर्थन गरे जहाँ उनको क्लबको युवा सेटअपमा ओले एरिक्सनको प्रशिक्षकमा सफल नामांकन थियो।
फ्रेडे लजung्गबर्ग शुरुआती वर्ष हल्मस्टैडको साथ।
फ्रेडी जुj्गबर्ग क्लबको साथ एक छाप बनाउन द्रुत थियो। उनले आफ्नो युवा कोच प्रभावित एरिक्सन जसले एक पटक भनेका केटा आफ्नो उमेरको लागि उल्लेखनीय बढी प्रतिभाशाली थियो। स्विडेनी जन्म भएको तारा यति राम्रो थियो कि ऊ कहिलेकाँही अन्य खेलाडी र केही अवसरहरुमा, उसको विपक्षीको पनि ख्याल राख्दछ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… युवा Ljungberg आफ्नो मा म्याग्निमिनिटी कहिलेकाँही बल आफ्ना साथीहरूलाई दिन्थ्यो ताकि उनीहरूसँग स्कोर गर्ने मौका होस्।
12 वर्षमा 1989 मा, उहाँ पहिले नै स्विडेनी फुटबलको भविष्यको रूपमा हेरिरहनुभएको थियो। फास्ट्रकलाई उसको प्रगतिको लागि बोल्दा फ्रेड्डीले हल्मस्टैड्स बीकेलाई उनलाई सर्ने बनाउन मनाउन खोज्यो दुई कदम माथि युवा वर्ग (p12 बाट p14 सम्म) जुन त्यस समयमा क्लब नीति बिरूद्ध थियो।
लिजungबर्ग हल्मस्टैड्स बीकेसँग फुटबल खेल्ने क्रममा पनि आफ्नो अध्ययनको शीर्षमा थिए। उनले शैक्षिक विषयहरूमा राम्रो प्रदर्शन गरे, 9th कक्षा समाप्त गरे। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उसको स्कूलको ग्रेड 4.1- पोइन्ट स्केल मा औसत5मार्क गर्दछ।
फ्रेडी लजung्गबर्ग जीवनी तथ्य - फेम टु फेम स्टोरी:
ऊ सबै ट्रेडहरूको ज्याक हुन सक्दैन: एक्सएनयूएमएक्समा, लिजung्गबर्ग पहिले नै हाई स्कूलको साथ गरिएको थियो र आफ्नो युवा फुटबल समाप्त गर्ने कगारमा थियो। यद्यपि तपाईको जीवनमा यो एउटा विन्दु नै हो जसले एक क्यारियरको लागि उत्कट ध्यानको माग गर्‍यो, एक कठोर लिजुungबर्ग अझै पनि विश्वविद्यालय शिक्षा र सिनियर फुटबल दुवै खेल्न जारी राख्न चाहन्थे। वास्तवमा उनले युनिभर्सिटीमा प्रवेश पाए जहाँ उनले अध्ययन शुरू गरे सूचना प्रविधि र अर्थशास्त्र.
चाँडै, लिj्गबर्गले लुगा लगाउन थाल्यो। उनले महसुस गरे कि उनी एक महामानव होइनन् जसले एकै समयमा विश्वविद्यालय दुबै तनाव र वरिष्ठ फुटबलमा केन्द्रित गर्न सक्थे। उनले आफ्नो व्यस्त शैक्षिक समय तालिका बीच एक पेशेवर फुटबलर हुने शारीरिक प्रतिवद्धता साथ सन्तुलनको लागि धेरै संघर्ष गरे। आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसँग परामर्श गरेपछि, वर्काहोलिकले फुटबलमा ध्यान दिन विश्वविद्यालय छोड्ने निर्णय गरे।
ल्युung्गबर्गले आफ्नो विश्वविद्यालय शिक्षा छोडेपछि 23 अक्टूबर 1994 मा आफ्नो वरिष्ठ पदार्पण गर्न गए। कम्तिमा एक बर्ष उनको पेशेवर पदार्पण मा, प्रतिभाशाली स्विडेनी आफ्नो मालिकहरु लाई प्रभावित गर्न थाले। उनले हम्मास्ट्याडलाई एक्सएनयूएमएक्समा स्वेन्स्का कपेन र एलेस्भेन्सकन (स्विडेनी प्रोफेशनल लिग खिताब) वर्ष 1995 मा जित्न सहयोग पुर्‍याए।
फ्रेड्मी जुj्गबर्गले हाल्मस्ट्याडमा हुँदा आफ्ना प्रशिक्षकहरूको मन जित्यो।
फ्रेडीको प्रभावकारी भूमिका स्विडेनी पेशेवर लिग जीत को लागी विदेशी क्लब को एक मेजबान देखे; एफसी बार्सिलोना, चेल्सी, एस्टन भिल्ला, पर्मा र आर्सेनल सबै मनपर्दो उनको हस्ताक्षर को लागी माग्दै।
फ्रेडी लजj्गबर्ग बायो - फेम टू फेम स्टोरी:
सबै प्रशिक्षकहरु मध्ये, यो थियो अर्सेन वेंजर, (चतुर प्रोफेसर) जसले उसलाई प्रत्यक्ष खेलाडी नदेखी पनि फ्रेडीको हस्ताक्षर (£ 3m) अधिकृत गर्ने असामान्य कदम उठायो। वेन्जरले टिभीमा लजung्गबर्गलाई मात्र हेरे तर यो देखेर उनीहरू छक्क परे spiky रातो कपाल केटा को जस्तो देखिन्थ्यो जोनी रोटेन उसको टोलीमा सम्मिलित हुँदै।
उहाँ आर्सेनल शर्टमा रंगीबेरंगी हुनु भन्दा पहिले लिj्गबर्ग आफ्नो मातृभूमि (स्वीडेन) मा सर्वश्रेष्ठ थिए।
उनले तुरुन्तै हाइबरीको पखेटा तल उडान गर्न थालेको कारण कुनै पनि कठिनाई बिना आर्सेनलसँग आफूलाई प्रमाणित गरे ल्युj्गबर्ग। उनले बेकामको लागी कुनै समय लिएनक्लबमा एक पंथ नायक। फ्रेडी सँग एक अत्यधिक कठिन साझेदारी रमाईलो थियरिरी हेनरी र अन्य महान अजेयहरूको एक होस्ट उसले क्लबमा सामेल भएकै साथबाट।
फ्रेन्डी जुj्गबर्गले थेसेरी हेनरीसँग आर्सेनलको बखत एक महत्वपूर्ण साझेदारी गरे।
आर्सेनलका लागि फ्रेडीको सर्वश्रेष्ठ क्षण तब आयो जब उसले क्लबलाई दोस्रो प्रीमियर लिग र एफए कप दोहोरो जित्न मद्दत गर्‍यो र यो आर्सेनल २०० 2003-०04 को हिस्सा बन्न पुग्यो।अजेय'स्क्वाड, अधिक महत्त्वपूर्ण कुरा, आर्सेनल सुनौलो केटा 2001 / 2002 प्रिमियर लिग प्लेयर अफ द सीजन अवार्डको रेकर्ड होल्डर बन्नुभयो।
फ्रेन्डी Ljungberg आर्सेनल संग आफ्नो शक्तिको सर्वोच्च शिखर।
उहाँ सेवानिवृत्त भएको समयमा, आर्सेनल पौराणिक कथाले लगातार5पटकको स्विडेनी मिडफिल्डरलाई जितेको थियो (2001, 2002, 2003, 2004, 2005)। उनले वर्षको स्विडेनी खेलाडी पनि जितेका थिए (२००२ र २००)) र ११ औं स्थानमा राखिएको थियो आर्सेनल.कटको गनरहरूको सबैभन्दा ठूलो 11० प्लेयरहरूमा।
सेवानिवृत्त भएपछि लजुjबर्गको शिक्षाप्रतिको प्रेमले उनलाई कोचिंग शिक्षा लिन थाले जहाँ उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। १२ जुलाई २०१ 12 मा, उनी आर्सेनल एकेडेमी क्लबको अण्डर १ 2016 को प्रशिक्षणको लागि जुडे। लजung्गबर्गको बुद्धिमत्ताले उनीलाई VfL वोल्फ्सबर्ग सहायक (२०१ 15), आर्सेनल यू २ with र उनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, नोभेम्बर २०१ th को २ th तारिखमा आर्सेनलको अन्तरिम कोच बनेको उनको कोचिंग क्यारियरको साथ प्रगति गरेको देख्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
फ्रेडी लजj्गबर्ग विगत गर्लफ्रेंडहरू:
वर्ष 2000 बाट शुरू गरी, फ्रेडीको सम्बन्ध र महिलासंग भेट भयो। 2000 बाट 2008 बीच, उनीसँग 8 गर्लफ्रेंडहरू थिए भनेर चिनिन्थ्यो; (1) स्टेफनी Saunders (2000), (2) डेनिस लोपेज (२००२ - २००)), (3) लरेन गोल्ड (२०० - - २००)), (4) माडेलीने लेक्सेन्डर (2005), (5) लुइसा लिट्टन (2006), (6) Gia Johnson (2007), (7) जेमी गन्स (2008) र (8) नेटली फोस्टर (हाल उनकी श्रीमती लेख्न को समयमा).
बसोबास गर्नु भन्दा पहिले फ्रेडीको ladies महिलासँग सम्बन्ध र मुठभेड थियो।
फ्रेडीले आफ्नो जीवनको प्रेम नताली फोस्टरलाई भेटे (होईन: 8) 2007 मा, जुन उनले वेथमको लागि आर्सेनल छोडे। पछि एक श्रीमती बनेकी केटी पनि धनी घरबाट आउँछिन्। तपाईंलाई थाँहा थियो? नाताली एक व्यापार कार्यकारी र प्रसिद्ध लन्डन ट्याक्सी टाइकुन डेरिल फोस्टरको छोरी हुन्। फ्रेडी जस्तै, उनी पनि एक 'socialite'- बेलायती फेसन योग्य समाजमा परिचित।
फ्रेड्डी जुj्गबर्ग पत्नी:
लामो प्रतिक्षा पछि, डेटि while गर्दा, दुई प्रेम चराहरूले जून9को 2014th मा लोकप्रिय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, लन्डनको अगाडि एक समारोहमा विवाह गर्ने निर्णय गरे।
फ्रेली लजung्गबर्ग बिताली फोटो नटाली फोस्टरको साथ।
दुबै फ्रेडी र नतालीले दुई बच्चाहरु अरिया र बिली ल्युung्गबर्गलाई विवाह पछि स्वागत गरे।
फ्रेडी Ljungberg व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरु:
फ्रेडी Ljungberg निजी जीवन चिन्न तपाईं फुटबल देखि टाढा आफ्नो व्यक्तित्व को एक राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। लिजungबर्गले एक पटक आफूलाई एक नमूनाको रूपमा देखाइदिएका छन, क्यारियर उसले फुटबलसँग मिल्न मनपराउँथ्यो। त्यस पछि, उनले कपडा राइन्ट क्याल्भिन क्लाइनको लागि शरीर र अण्डरवियरका सबै प्रकारका मोडल गरे।
फ्रेडी लजj्गबर्ग निजी जीवन फुटबलबाट टाढा - उनले एक पटक मोडलि inमा ठूलो प्रतिष्ठा कमाए।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… शरीर विशेषताहरु भएको; शीतल छेस्को एब्स, उच्च गालाका अस्थिहरू, र पालिने हेराईले धेरै महिलाहरूलाई आफ्नो वरिपरि झुण्ड्यायो, यो कारण उहाँ आर्सेनलको समयमा धेरै सम्बन्धहरू राख्नुभयो। आफ्नो मोडेलि days समयमा महिलाहरूसँगको अनुभवको बारेमा बोल्दै फ्रेडीले एक पटक स्विडेनी पेपर डिलाई भने (सूर्यको रिपोर्ट);
“यद्यपि यो एकदम अट्टेरी लाग्छ र म, कस्ने छैन। उदाहरणका लागि ..., जब म राती क्लब जान्छु, केटीहरू आउँथे र मेरो cr ** tch समाते। तेस्तै खालको!!!। हो! यो जताततै भइरहेको थियो। कहिलेकाँही तिनीहरू पछाडिबाट आउँदछन्, पक्षले मलाई तान्यो र मसँग टग्यो। सबैभन्दा खराब पक्ष यो हो कि म यो बारे मा एक खराब कुरा गर्न सक्दैन। जब म रिसाएर उनीहरूको हात हटाउँथे, मानिसहरू हँसाए। "
यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन कि फ्रेडीलाई इ England्ल्यान्डको मान्यता दिइयो से * आइस्ट फुटबलर उसको प्रसिद्ध मोडलि model क्यारियरको कारण।
फ्रेडी लजung्गबर्ग जीवन शैली तथ्य:
फ्रेड्डी जुung्गबर्गको जीवनशैली चिन्नेले तपाईंलाई उसको जीवनस्तरको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। कुनै श doubt्का बिना, ल्ung्गबर्ग एक धनी मानिस - लगभग m 8m को अनुमानित को साथ। को राम्रो मान्छे आफ्नो विदेशी जीवनशैलीको लागि सम्पूर्ण उत्तर लन्डनमा राम्रोसँग परिचित छ, जसलाई उसको चम्किलो कारहरूले सजिलैसँग देख्न सक्दछ।
फ्रेड्डी जुj्गबर्गको कारले उनी एक आकर्षक जीवनशैलीको चित्रण गर्दछन्।
आर्सेनल पौराणिक कथा धेरै पटक देखिएको छ, उत्तरी लन्डनको बीचमा फेरारी 360 स्पाइडरमा, जुन driving 85,000- £ 90,000 को मूल्य ट्याग बोक्छ। उसलाई पनि भेटियो (2013 वर्षमा) आफ्नो कुञ्जी, अमाडियसको साथ खानाको प्लेट खाँदै गर्दा आफ्नो रेन्ज रोभरको बुटमा बसिरहेको।
फ्रेन्डी जुj्गबर्गसँग आफ्नो रेंज रोभरमा बुटमा डिनर खानको कुनै समस्या छैन।
फुटबल खेलाडीहरू, हामी मध्ये कोहीले, हाम्रा घरपालुवा जनावरहरूलाई माया गर्छन् र फ्रेडी पनि यसको अपवाद होइन। यहाँसम्म कि त्यहाँ एक भनाइ छ कि आधुनिक खेलमा कुनै वफादारी छोडियो, यसले पक्कै पनि फ्रेडी र उसको कुकुर, अमेडियस बीचको साझेदारीलाई ध्यानमा राख्दैन। तलको फोटोले फ्रेडीको नम्र जीवनशैलीको सार दिन्छ। ऊ उसको अघिल्लो जन्मदिन मनाएर ठीक निदायो।
फ्रेड्डी जुj्गबर्ग आफ्नो राम्रो मित्रसँगै उसको सुन्दर बगैचामा सुतिरहेकी छिन्।
फ्रेडी लजj्गबर्ग अनटोल्ड तथ्यहरू:
फ्रेडी लजung्गबर्ग ट्याटूहरू: तपाईंलाई थाँहा थियो?… फ्रेडी फुटबलरहरूको पुस्ता मध्ये एक थियो जसले art ० र दशकको उत्तरार्ध र २००० को शुरुमा शरीर कलालाई अँगाल्न शुरू गरे। त्यतिखेर, स्विडेनीले आफ्नो कालो बिरालोको ट्यापलाई आफ्नो हिपमा फ्लन्ट गर्न मन पराउँछन् जबकि ऊ आफ्नो प्यान्टमा मोडेल गर्दछ। लस एन्जलस मा डिजाइन गरिएको यो ट्याटू समाप्त हुन को लागी आठ घण्टा लाग्यो। तल अवलोकन गरिएझैं, उनीसँग अर्को एलए डिजाइन गरिएको ट्याटू पनि छ जसले आफ्नो पाखुरामा धर्म (ईसाई धर्म) प्रदर्शन गर्दछ।
फ्रेडी Ljungberg ट्याटू र परिणाम रोग।
एकपटक उसलाई एचआईभी-एड्स भएको शंका लागेको थियो: 2005 वरिपरि, फ्रेडी लगातार हिप चोटको कारण महत्त्वपूर्ण खेलहरू हराउन थाले। उनलाई रोग लागेको हुनुपर्छ भन्ने शंका पछि उसले आफ्नो समस्याको कारण पत्ता लगाउन क्रमबद्ध परीक्षणहरू (एड्स र क्यान्सर सहित) गर्यो। शोकाकुल हुँदै, उनलाई एउटा ट्याटूमा दुर्लभ प्रतिक्रिया भएको पत्ता लाग्यो। फ्रेडीले हिपको शल्यक्रिया गर्‍यो। अनुसार उनको शब्दहरु मा thesun;
“म डराएको थिएँ। मलाई धेरै चोटि परिक्षण गरियो, तर कोही पनि होइन, मलाई पनि थाहा भयो कि ममा के गलत थियो।
म धेरै चिन्तित थिए। मैले बिरामी वा बिरामी महसुस गरिनँ, तर पक्कै पनि मलाई थाहा थियो म भित्र घाइते भएँ। अन्ततः, डाक्टरहरूले मेरो ट्याटुमा केहि भयो भनेर पत्ता लगाए। म ढुक्क थिए कि तिनीहरूले समस्या समाधान गरे ... म अहिले ठीक छु। "
फ्रेडी Ljungberg को उपनाम: तपाईंलाई थाँहा थियो?… इ England्ल्यान्डमा आफ्नो फुटबल जारी राख्न अघि सर्नु भन्दा पहिले उनी "कार्ल फ्रेड्रिक लर्जगन " र होइन “फ्रेडी लजj्गबर्ग“। जे होस्, आर्सेनलको लागि खेल्दा ऊ उपनाम दिँदै थियो “फ्रेड“, आफ्नो नाम स्वीडेन मा विरलै प्रयोग एक नाम।
एक XBox गेमर: फ्रेड्डी एक हुन जसलाई तपाईं सायद थाँहा हुनुहुन्नथ्यो कि एक गेमर हो। फुटबलबाट टाढा, ऊ आफ्नो राम्रो साथीसँग बाहिर जान मन पराउँछ रुउड गुलिट (पूर्व डच फुटबल व्यवस्थापक र फुटबलर)। दुबै साथीहरूले पबमा ह्या hangingआउट गर्दा Xbox खेलहरूमा फिफामा केही घण्टा गुमाउनु भन्दा बढी केही प्रेम गर्दैनन्।
फ्रेड्डीले आफ्नो राम्रो साथी रुड गुलिटको बिरूद्ध Xbox कन्ट्रोलर उठाउनु भन्दा बढी माया गर्दैनन्।
राष्ट्रिय रेकर्डहरू: तपाईंलाई थाँहा थियो?… लिj्गबर्ग इ player्ल्याण्ड बाहिर एफए कप फाइनलमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी थिए। उनी लगातार एफए कप फाइनलमा स्कोर गर्ने 40 वर्षमा पहिलो खेलाडी पनि बने। कुलमा, उसले9क्लब र 16 व्यक्तिगत सम्मान आफ्नो नाम हो। तल उसको क्यारियर सम्मान मा एक नजर लिनुहोस्।
फ्रेडी Ljungberg क्लब र व्यक्तिगत सम्मान। क्रेडिट: विकिपेडिया र आर्सेनल न्यूज
फ्रेडी Ljungberg परिवार जीवन:
फ्रेड्डीले विरलै मिडियामा आफ्ना बाबुआमा वा परिवारका सदस्यहरूको बारेमा कुरा गर्ने वा प्रदर्शन गर्ने गर्दछन्। यसैले यो अनुमान गरिएको छ कि उसको बुवा र आमा हाल स्वीडेनको सम्पन्न हल्मस्टैड क्षेत्रमा बस्छन् जहाँ उसले फुटबल शुरू गरे। यो देखिन्छ देखि, यो पनि आफ्नो भाइ कार्ल ओस्कर फिलिप Ljungberg सहित परिवारका सबै सदस्यहरु देखिन्छ सार्वजनिक मान्यता खोज्न को लागी एक सचेत विकल्प गरे।
पछिल्लो समय मिडिया उनको परिवारको पकड एक दशक भन्दा बढी पहिले थियो, एक पटक उसको बुवा समस्यामा पर्‍यो। ठीक जुलाई १ th तारिख, २०० F मा, फ्रेड्डी जुj्गबर्गका बुबालाई लगाइएको थियो r * pe र से * यूअल उत्पीडन यो खराब समाचारको एक टुक्रा हो जुन आर्सेनल पौराणिक कथालाई भत्काइयो (TheMirror 2008 रिपोर्ट)। रोयलाई स्वीडेनमा रहेको परिवारको घरमा पक्राउ गरिएको थियो र रिहा हुनु अघि उनी तीन रात हाल्मस्टैड प्रहरी हिरासतमा बिताए।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो फ्रेडी लजungबर्ग बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
स्वीडिश फुटबल डायरी